SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Korean Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Serbian Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
ZVIRI kuitika kuMiddle East zviri kuita kuti nyika yose itye. Zvinhu zvakadai sekurwisa pachishandiswa zvitundu musere-musere, kurwisana kwevanhu vanenge vakapakatira zvombo uye kubhomba kwemagandanga, zvinongogara zvichiitika. Kuwedzera panhamo idzi, hazvishamisi kuti zvombo zvenyukireya zvinogona kungoshandiswa. Ndokusaka vanhu kwose kwose vachigara vakangobatira ura mumaoko.
Mumwedzi waMay muna 1948, nyika yose yakanga yakatarira zvaizoitika kuMiddle East ichitya. Panguva iyoyo, simba raiva neBritain rokutonga nyika yainzi Palestine, rakanga rava kuguma, uye hondo yakanga yava kuda kutanga. Mugore ra1947, Sangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose rakati panyika dzakanga dzatopambwa paifanira kuumbwa Nyika yevaJudha yakazvimiririra. Nyika dzakapoteredza dzevaArab dzakanga dzatsidza kuti izvi zvaisazombofa zvakaitika. Sangano revaArab rakayambira kuti, “Kuganhura nyika iyi kuchangoita kuti ropa rideuke.”
Wakanga uri musi weChishanu masikati, 14 May 1948, nenguva dza4:00. Simba raiva neBritain muPalestine rakanga rava kupera. Mumiziyamu yekuTel Aviv maingova neboka duku revanhu 350 vakanga vakokwa pachivande kuzonzwa chiziviso chakanga chakamirirwa nemaziso matsvuku chokuti nyika yeIsrael yakanga yava nokuzvitonga kuzere. Miziyamu iyi yakanga yakachengetedzwa chaizvo, kuitira kuti vavengi venyika iyi yakanga ichangowana kuzvitonga vasavhiringidza zvaiitika.
David Ben-Gurion, 14 May 194
David Ben-Gurion, mutungamiriri wesangano reIsrael’s National Council, akaverenga gwaro raiti The Declaration of the Establishment of the State of Israel. Muchidimbu raiti: “Isu, vedare rePeople’s Council, takamiririra vagari vechiJudha vari muEretz-Israel . . . nemhaka yekodzero yenhaka yenyika yedu uye chisarudzo chakaitwa neGeneral Assembly yeSangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose, tinozivisa kuti pava neNyika yevaJudha muEretz-Israel ichanzi nyika yeIsrael.”
Kuzadzika kwoUprofita hweBhaibheri Here?
Vamwe vanopinda chechi dzakabuda muRoma vanofunga kuti nyika yeIsrael iripo nhasi ndiyo yakagara yataurwa muuprofita hweBhaibheri. Somuenzaniso, mubhuku rake rinonzi Jerusalem Countdown, mumwe mufundisi anonzi John Hagee anoti: “Chiitiko ichi chinokosha chakagara chataurwa nomuprofita Isaya paakati: ‘Rudzi ruchaberekwa muzuva rimwe chete.’ (Ona Isaya 66:8.) . . . Uku ndiko kwaiva kuzadzika kukuru kwouprofita muzana remakore rechi20. Izvi zvainyatsoratidza pachena kuvanhu vose kuti Mwari wenyika yeIsrael mupenyu uye achiriko.”
Mashoko iwayo ndeechokwadi here? Isaya 66:8 yakagara yataura nezvokuumbwa kwenyika yeIsrael mazuva ano here? Musi wa14 May 1948 ndiwo here waiva musi “wokuzadzika kukuru kwouprofita muzana remakore rechi20”? Kana nyika yeIsrael ichiri rudzi rwaMwari rwaakasarudza, uye achiri kuishandisa kuzadzisa uprofita huri muBhaibheri, vanhu vanodzidza Bhaibheri kwose kwose vangafara chaizvo kuzviziva.
Uprofita hwaIsaya hunoti: “Ndiani akambonzwa chinhu chakadai? Ndiani akamboona zvinhu zvakadai? Nyika ingaberekwa nezuva rimwe chete panongouya kurwadziwa here? Kana kuti rudzi rungaberekwa pakarepo here? Nokuti Ziyoni parakangorwadziwa rakabva rabereka vana varo.” (Isaya 66:8) Ndima yacho inonyatsojekesa kuti paizova nerudzi rwaizongoerekana rwavapo, sokunge rwaberekwa nezuva rimwe chete. Asi ndiani aizoita kuti rudzi urwu ruberekwe? Ndima inotevera inotibatsira kuziva kuti ndiani: “‘Zvino ini, ndingaita kuti munhu atange kusununguka ndikasaita kuti asununguke here?’ Jehovha anodaro. ‘Kana kuti ndingaita kuti munhu asununguke ndovhara chibereko here?’ Mwari wako adaro.” Jehovha Mwari ari kujekesa kuti ndiye aizoita kuti rudzi rwacho ruberekwe zvinoshamisa.
Nyika yeIsrael iri kutongwa nehurumende yegutsaruzhinji inoratidza pachena kuti haivimbi naMwari womuBhaibheri. Vanhu vokuIsrael muna 1948 vakamboratidza here kuti Jehovha Mwari ndiye akaita kuti vave nyika yakazvimiririra? Havana kudaro. Kunyange mumashoko akatanga kutaurwa echiziviso chiya hapana panombova nezita raMwari kunyange shoko rokuti “Mwari.” Bhuku rinonzi Great Moments in Jewish History rinoti nezvemashoko acho okupedzisira: “Kusvika na1:00 masikati dare reNational Council parakaita musangano waro, vakanga vasati vabvumirana kuti mashoko api avangataura pakuzivisa kuti vava nyika yakazvimiririra. . . . VaJudha vaida kunzwa pachitaurwa ‘nezvaMwari waIsraeri.’ Chikwata chisingadi kunzwa nezvechechi chakabva chatsika madziro. Ben-Gurion akazvitsigirawo achiti ngapabviswe shoko rokuti ‘Mwari’ paiswe rokuti ‘Dombo.’”
Nanhasi vanhu venyika yeIsrael vanoti chisarudzo chakaitwa neSangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose uye kodzero yenhaka yevanhu vechiJudha ndizvo zvakaita kuti vave nyika yakazvimiririra. Zvingava nemusoro here kutarisira kuti muzana remakore rechi20, Mwari womuBhaibheri aitire chishamiso chikuru vanhu vasingadi kumupa mbiri?
Musiyano Uri Pakati peIsrael yaNhasi nevaIsraeri Vekare
Zvinoitwa nevanhu venyika yeIsrael nhasi zvakasiyana nokure nezvakaitika muna 537 B.C.E. Mugore iroro, rudzi rwaIsraeri ‘rwakaberekwazve’ sokunge nezuva rimwe chete pashure pokunge rwatsakatiswa nevaBhabhironi makore 70 akanga apfuura. Panguva iyoyo, uprofita hwaIsaya 66:8 hwakanga huchinyatsozadzika apo Mambo Koreshi Mukuru wePezhiya akakunda Bhabhironi ndokurayira kuti vaJudha vadzokere kumusha kwavo.—Ezra 1:2.
Mambo wePezhiya Koreshi akaona kuti Jehovha ndiye akanga aita kuti akunde muna 537 B.C.E., uye vaya vakadzoka kuJerusarema vakanga vaine chinangwa chokunotangazve kunamata Jehovha uye kuvakazve temberi. Nyika yeIsrael haina kumbobvira yaratidza pachena chido kana pfungwa dzaiva nevaIsraeri vekare.
Vachiri Rudzi Rwakasarudzwa naMwari Here?
Muna 33 C.E. vaJudha pavakaramba Mesiya Mwanakomana waJehovha, vakapedzisira vasingachadiwi naMwari serudzi rwaakasarudza. Mesiya pachake akati: “Jerusarema, Jerusarema, muurayi wevaprofita neanotema nematombo vakatumwa kwaari . . . Tarirai! Maramwirwa imba yenyu.” (Mateu 23:37, 38) Mashoko aJesu akazadzika muna 70 C.E., mauto eRoma paakaparadza Jerusarema netemberi yaro nedzinza revapristi. Asi zvaizofamba sei kuti chinangwa chaMwari chizadzike chokuva ‘nepfuma chaiyo pakati pemamwe marudzi ose, . . . umambo hwevapristi norudzi rutsvene’?—Eksodho 19:5, 6.
Muapostora Petro uyo aiva muJudha pachake akapindura mubvunzo iwoyo mutsamba yaakanyorera vaKristu vakanga vari vaJudha nevasiri vaJudha. Akati: “Imi muri ‘dzinza rakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, vanhu vake chaivo,’ . . . nokuti maimbova musiri rudzi, asi zvino mava rudzi rwaMwari; maiva vaya vakanga vasina kunzwirwa ngoni, asi zvino mava vaya vakanzwirwa ngoni.”—1 Petro 2:7-10.
Saka vaKristu vakasarudzwa nemudzimu mutsvene vanoumba rudzi rwokufananidzira. Izvi hazvinei nokuti vanogara kupi uye havaberekwi vane kodzero dzokuva murudzi urwu. Muapostora Pauro akazvitsanangura achiti: “Kudzingiswa kana kusadzingiswa hazvikoshi, asi chisikwa chitsva ndicho chinokosha. Vaya vose vachafamba zvakanaka maererano nomurau uyu wokufamba nawo, rugare nengoni ngazvive pavari, kunyange pana Israeri waMwari.”—VaGaratiya 6:15, 16.
Nyika yeIsrael inoti munhu anozvarwa somuJudha ane kodzero yokuzivikanwa sechizvarwa chemo kusanganisirawo vamwe vasiri vaJudha asi vanenge vachida kuva zvizvarwa zvechiJudha. Asi kodzero yokuva “Israeri waMwari” inotaurwa muBhaibheri inongopiwa vaya ‘vanoteerera uye vakasaswa ropa raJesu Kristu.’ (1 Petro 1:1, 2) Achitaura nezvaIsraeri waMwari uyu, kana kuti rudzi rutsva, Pauro akanyora kuti: “Anonzi muJudha haasi uya akadaro nechokunze, uye kudzingiswa hakusi kuya kwokunze kunoitwa panyama. Asi anonzi muJudha ndiye uya akadaro nechomukati, uye kudzingiswa kwake ndiko kuya kwomwoyo nomudzimu, kwete nebumbiro romutemo rakanyorwa. Kurumbidzwa kwaiyeyo kunobva kuna Mwari, kwete kuvanhu.”—VaRoma 2:28, 29.
Rugwaro urwu runotibatsira kunzwisisa mashoko aPauro asinganyatsonzwisiswi nevanhu. Mutsamba yaakanyorera vaRoma, Pauro akatsanangura mafananiro akanga akaita vaJudha vaiva vasingatendi nemapazi omuorivhi ayo akakwachurwa kuitira kuti ‘mapazi omusango’ aimiririra vanhu vaiva vasiri vaJudha anamatidzwe. (VaRoma 11:17-21) Achipedzisa mufananidzo uyu, Pauro akanyora kuti: “Vamwe vaIsraeri vakagomara pfungwa kusvikira nhamba yakazara yevanhu vemamwe marudzi yapinda, uye vaIsraeri vose vachaponeswa saizvozvi.” (VaRoma 11:25, 26) Pauro aireva here chipatapata chaizoitwa nevaJudha vakawanda vachichinja kuva vaKristu? Kubva pane zvatinoona, hapana zvakadaro zvati zvaitika.
Mufananidzo waPauro wemuti wemuorivhi unorevei?
Pauro paakati “vaIsraeri vose” akanga achireva Israeri wokufananidzira, kureva vaKristu vakasarudzwa nomudzimu mutsvene. Akanga achireva kuti kukundikana kwevaJudha kugamuchira Mesiya kwakanga kusingazotadzisi chinangwa chaMwari chokuva ‘nemuti womuorivhi’ wokufananidzira une mapazi anobereka zvibereko kuti chizadzike. Izvi zvinoenderana nemufananidzo waJesu paakazvifananidza nemuzambiringa une mapazi asingabereki zvibereko ayo aizokwachurwa. Akati: “Ndini muzambiringa wechokwadi, uye Baba vangu ndivo murimi. Bazi rose riri pandiri risingabereki zvibereko vanoribvisa, uye rose rinobereka zvibereko vanorichenesa, kuti ribereke zvibereko zvizhinji.”—Johani 15:1, 2.
Kunyange zvazvo kuumbwa kwenyika yeIsrael kusina kufanotaurwa neBhaibheri, kuumbwa kwaIsraeri wokufananidzira kwakanga kwagara kwataurwa. Kana ukaziva rudzi rwaIsraeri wokufananidzira uye ukawadzana narwo, uchawana zvikomborero zvisingaperi.—Genesisi 22:15-18; VaGaratiya 3:8, 9.